Mobile - ny fotoana tompoko | Apg29
Ary tonga ny fotoana mba hifantoka amin'ny aretina-pirenena vaovao.
Be loatra ny olona efa tonga mpanompon'Andriamanitra ny finday sy ny maso ka nanjaka eo anilany izy, raha tokony ho ny fomba hafa manodidina, ary izany no marary.
Inona no mieritreritra fa toy ny adaladala kely fampiasana ny finday.
Mety ho be dia be ny fihetsiky ny izany, dia miantso io aretina ny aretina, nefa amin'ny lalana tsy nanita-dresaka.
Raha ny marina fa ny finday dia manome fahafahana antsika mba ho mifandray tsy tapaka, Surf ary velona tao an-tserasera tontolo izao dia midika rehetra. Ny ankamaroan'ny izany dia pananana, fa misy lafy ratsiny: maro tsy afaka mametra ny fampiasana finday.
Kosa mety ho fitaovana mba hanamorana ny mpampiasa, dia nanjary tompon'ny aina maro. Be loatra ny olona efa tonga mpanompon'Andriamanitra ny finday sy ny maso ka nanjaka eo anilany izy, raha tokony ho ny fomba hafa manodidina, ary izany no marary.
Taona vitsy lasa izay dia Nosokajina noho ny marary saina, atao hoe fiankinan-doha amin'ny aterineto. Io "aretina" dia nivoaka tao amin'ny American Journal ny Psyhiatry tamin'ny 2008.
Nanomboka teo, ny isan'ireo izay niditra nandritra ny fiankinan-doha izany nitombo izaitsizy.
Ahoana izany Miseho
Ahoana no Miseho rehefa voalaza fa aretina? Eny, foana ianao mihevitra fa tsy maintsy mampiasa ny telefaonina. Izany no zara raha misy nanita-dresaka. Maro ireo fampianarana izay hanamafy izany.
The News dia nitatitra fa ireo mpampiasa finday eo ho eo mampihetsi-po ny telefaonina 2.600 (!) Times indray andro. Dia mety ho sarotra ny handray. Fa izany ihany koa izay ny rohy hoe:
Raha ny tanora, dia misy koa ny vaovao mikasika ny fampiasana ny finday amin'ny alina. Tsy misy latsaky ny 43% manao azy io eo amin'ny tanora eo anelanelan'ny 18-24 taona ny 73% izay mijery telefaonina ao amin'ny misasakalina. Izany, araka ny fanadihadiana Deloitte ny lehibe.
Angamba, dia mampidi-doza tsy ho afaka haka aina amin'ny alina ary hahazo ny torimaso ilaina. Tao anatin'ny fotoana fohy, dia ho vokany eo amin'ny olona ratsy sy ny teny intsony dia azo Nihevitra fa mampidi-doza mivantana.
Tahirin-kevitra hafa mampiseho fa ireo ankizy tanora an-tserasera 6 ora isan-andro, ary ny tanora rehetra manerana 9 ora!
Inona sisa ny fanary andro izany, raha ny fotoana am-pianarana sy hatory nakòn-? Inona no atao hoe ity fiainana ity? Eny, ary lalana mandany ny fotoanany - fahazazany sy ny fahatanorany.
Dia tsy ho mpanompo
Tsy natao ho andevo ny zavatra, na amin'ny fomba hafa hanimba ny fahasalamana. Ho an'ny kristianina, izany no tokony ho nomena, ary ny tondrozotra ho amin'ny fiainana. Tena zava-dehibe ny hikarakara sy hitantana araka ny tokony ho fotoana.
Izany dia mikasika ny fandaniana fotoana iarahana amin 'ny Tompo, ary aoka izy ho Tompon'ny fiainany - tsy misy telefaonina, na zavatra hafa izay mety hanelingelina.